ईस्मा गाउँपालिका वडा नंं. ६ मा १ घर १ धारा कार्यक्रम सम्पन्न - नयाँपुल अनलाइन डटकम
गुल्मी जिल्लाको ईस्मा गाउँपालिका वडा नंं. ६ मा १ घर १ धारा कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । वडा अध्यक्ष हिरा बहादुर जिसिका अनुसार वडालाई खरको छानोमुक्त वडा समेत घोषणा गरिएको छ ।
यस्तै बिद्युतको क्षेत्रमा काठको पोल बिस्तापित गरि फलामको पोल राखीएको छ । वठाका गरिब तथा बिपन्न बर्गहरुको लागी निःशुल्क चुलो बितरण र यस्तै निःशुल्क वाईरिङ लगायतको काम गरिएको छ । स्वास्थ्यको क्षेत्रमा वडामा गर्भवती महिला र सुत्केरीहरुको लागी पोेषण कार्यक्रम संचालन गरिएको छ । यस्तै ल्याव संचालन, निःशुल्क सेनेटरी प्याड वितरण, सामान्य औषधिहरुको निःशुल्क बितरण लगायतका कामहरु भईरहेका छन ।
वडाका सबै टोलहरुमा सडक पुगिसकेको वडाअध्यक्ष जिसिले जानकारी दिनुभयो । अव ति सडकहरुको स्तरोन्नती लगायतको काम पनि भइरहेको छ । वडाका कृषकहरुलाई टलेन वितरण, बाख्रापालन गर्नेहरुलाई अनुदान, ब्यवस्थित मासुपसल संचालन गर्नृेहरुलाई ५० हजार रुपैया अनुदान दिने लगायतको काम पनि वडाले गरिहरको छ ।
पुल पुलेसो निर्माणमा पनि वडाले सक्रियता देखाएको छ । कुखुरेखोलामा १ करोडको लागतमा पुल निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छ । वडामा हाल ८ वटा बिद्यालयहरु संचालनमा रहेका छन । ति बिद्यालयहरुमा भौतिक संरचनाहरु निर्माणको लागी वडाले पहल गरिरहेको छ । पुरानै भवनमा वडा कार्यालय संचालानमा रहेको छ । वडाले गरिव तथा विपन्न वर्गहरुलाई रोजगारी दिने उद्येश्यले सेरामिक्स उद्योग समेत संचालान गरेको छ । हालस सम्म भएका बिकास निर्माण र सेवा प्रवाहका कामहरुमा वडाका नागरिहरुले पुर्ण रुपमा वडा कार्यालयलाई सहयोग गरिरहेको छ । आगामि दिनहरुमा कोरोना माहामारीको असरलाई कम गर्दै समृद्ध वडा निर्माणमा लाग्ने वडा अध्यक्ष जिसिले बताउनुभयो ।